Last updated: Dec. 27 2017 | 4 Maminitsi verenga
Misi rinogona kutemesa musoro wose asi kunyanya saka kana uchizopa musi ane murume chinoshamisa ani mungadai zvechokwadi vanoda kuziva uye asi imi vanonyara uye netsa. Kazhinji chinhu icho kufuratirwa. Munhu wose chete achipfeka kuti uchakwanisa kuwana vakashinga kana "murume" kana "mukadzi" asi munhu anonyara uye kusagadzikana Ndinogona kupupura kuti zvaisazova nyore.
Rine payakaipira akawanda akadai vasingagoni kuziva murume, anga zvakatowanda ndokuhwadzira pane mumwe munhu aizova musi uye zvichida kurasikirwa akwirwe kuti angadai akaita kana aregedza zvechokwadi here. Chokwadi pane mukana nokuda kana zvechokwadi munhu anokufarira ipapo vachava tikaedza uye ipapo iwe kuti ivo zvechokwadi vanoda kuti imi. Pashure zvose tiri kurarama munyika isina kusimba Fast aifamba uye kuti tifambirane haangoregi kuitika muupenyu hwedu nyanzvi upenyu. Kunowanzoda kumawere kupinda muupenyu hwedu zvakare asi kana zvechokwadi munhu anokufarira havangakukundi basa zvinotora nguva yakareba sei kuti Woo iwe.
Ndiri kuenda kutaura chidimbu zvatinofanira kuita izvi kuvandudza sei isu kuuya pamusoro musi asi ndiri pasi pasina neunyengedzi, uye handidi kuti kuisa mumwe munhu pasi chero kana, kuti izvi zvishoma muitiro kuti inofanira akashanda uye hamuzokwiri kuva vakakwana usiku hwese.
Pfeka To Ratidzai You
Iri zano iro zvinganaka kuti munhu kana mukadzi kuenda musi pamwe kuti o-saka-inopisa munhurume! Asi chinotonyanya kukosha kana uri anonyara, netsa munhu. Pashure pezvose isu kutaura ani tiri kuburikidza zvatinofanira kupfeka kana eccentric kana kupfuura demure uye kana uchinetseka kukurukura ndiwe vachishandisa mashoko zvino sei yaunopfeka kunogona kubatsira kuisa akayambukira murume chii haugoni nemashoko. Somuenzaniso kana uri kupfeka asangana eccentric nenzira zvinogona kuratidza pasina kutaura chinhu kuti uri Lady Gaga rusero kana kuti uri kwatangwa chaizvo uye mafaro. Nguva dzose yeuka kuti agadzire nzira Unozviona uye kwete sei uchifunga mukadzi kana murume wake akakwana yaizova mapfekero. Zviri nyore chaizvo kuwira mumusungo iwoyo. Ndine pachangu. Paaiva kushamwaridzana varume handina fancied ini vakapfeka sei Ndinonzwa vangada ini kupfeka nokuti ndingada kuda kuti kufanana ini asi ngozi iri kuti kunyange kana vanoita semi havasi vade imi nokuda iwe uye kunyanya kana muchitsvaka zvichibvira hurefu zvingava here kuti vaone chii chaunoda kupfeka nemhaka pashure zvose ndiyo mhando zvidavado unenge wakapfeka navo ukama hwako hwose.
Tora mutsetse mumwe nomumwe Kana totaura
Chinhu chikuru anga vainyara uye kusagadzikana ari overthinking uye munonzwa zvakawanda kuti iwe chete vanoda kumisa overthinking ezvinhu. Asi kana kuti zvaiva nyore dai chete vanhu izvozvo. Overthinking chinhu rinova midzi munhu asi chinogona kukurirwa. Haisi nyore sezvo zvose ichidzikira kamwechete. Unofanira kutora zvishoma nezvishoma uye mashoko ane zuva atore mutongo mumwe sezvo pava. Edza kufunga pamusoro zuva akawandisa pachine. Zadza pfungwa dzako nezvinhu zvimwe zvinhu zvakafanana Concerts, kuverenga, neTV, mafirimu, kupfuuridza nguva. Chinokosha chete kuchengeta pfungwa dzako sezvo zvikuru kubva zuva kuitira kuti sezvo zvakawanda unhu hwako chinobuda musi nekuti hauna aiva nguva yokufunga kubudikidza zvose kungazoguma uye mapinduriro aunofanira uye zvaunofanira kumbira.
Funga waizonzwa About Izvi In Makore Gumi sei
Kufunga nezvokuti sei uchanzwa pamusoro chinhu mumakore gumi inzira yakanaka kwazvo zvekuongorora kukosha ezvinhu. Edza uye kufunga kana Zvakakosha uye hombe sezvo imi muri kuiita kuti ave. Uti imi vanoita chikanganiso, saka manje? Uchava kunetsa kwamuri gumi apo iwe kungangotadza vanosangana munhu hope dzako? Kana munhu asingagoni kutadza kuona zvikanganiso mashoma ipapo here kuva navo? Kunze vachazowana achitotyawo zvakare uye vari Ungangove kuenda kuita zvikanganiso mashoma pachavo saka zviri pamusoro yakatarisana zvavo uye anotarisira ivo vangasaita zvako. Haufaniri kuva nomumwe munhu nguva dzose rinorondedzera iwe pazvinhu zvaunoita zvakaipa. Upenyu hwakaita kuti zvaizova pashure zvose?
Izvi hazvisi kuzoitika usiku hwese. Ungatoedza vamwe kudanana njodzi apo iwe ugere uye achitaura zvishomanana. Asi zvose pamusoro mberi. Vanobatanidzwa mune vazhinji evanhu zvinhu sezvaunogona uye pamusoro nguva chivimbo chako pakutaura kuchavandudzika. Uye kana uchiita zvakarurama munhu achava imomo kuteerera kana asina nechakare vanouyawo vakakoromora masvingo avo uye kana ari muupenyu hwako kufunganya izvi zvose sei imi naJessica uye sei kutora nguva yakareba kuti awane mumwe nokuti iwe haagoni kuita kuti kubatana nenzira vamwe sokuti nyore kuita haazorambi basa. Ndinoshuva kuti zvose nomwoyo wose zvakanakisisa rombo.